” အစြမ္းထက္လွတဲ့ ေမတၱသုတ္ ကို နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆိုနည္း (ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္) “ - Thadin
HomeKNOWLEDGE” အစြမ္းထက္လွတဲ့ ေမတၱသုတ္ ကို နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆိုနည္း (ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္) “
” အစြမ္းထက္လွတဲ့ ေမတၱသုတ္ ကို နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆိုနည္း (ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္) “
March 14, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on ” အစြမ္းထက္လွတဲ့ ေမတၱသုတ္ ကို နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆိုနည္း (ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္) “
“တနလၤာျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ တနလၤာသားသမီးမ်ားအားလံုး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊အေ႐ွ႕အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း
ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၅ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။
“ဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေတာင္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၇ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။
“ေသာၾကာျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေျမာက္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွေမတၱာသုတ္ကို ၂၁ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။
၁။ တနငျ်ဂနှနေေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“တနငျ်ဂနှဂွေိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှတနငျ်ဂနှသေားသမီးမြားအားလုံး၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့မွောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”……ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၆ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၂။ တနငျ်လာနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“တနငျ်လာဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ တနငျ်လာသားသမီးမြားအားလုံး ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့အရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး
အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၅ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၃။ အငျ်ဂါနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“အငျ်ဂါဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ အငျ်ဂါသားသမီးမြားအားလုံး ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့တောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၈ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၄။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျအာရုံတကျမှ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ- စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ တောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၇ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၅။ ရာဟုဂွိုလျအတှကျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နေ့လညျ ၁၂ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအတှငျး၊ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“ရာဟုဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ရာဟု သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ အနောကျမွောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၂ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၆။ ကွာသပတေးနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ– “ကွာသပတေးဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ကွာသပတေး သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊
အနောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၉ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၇။ သောကွာနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“သောကွာဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ သောကွာ သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ မွောကျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှမတေ်တာသုတျကို ၂၁ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၈။ စနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–
“စနဂွေိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ စနေ သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ အနောကျတောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုးနတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ.. ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁ဝခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။
၁။ ကွိုကျရာနေ့မှာ အထကျပါအတိုငျး သကျဆိုငျရာ နေ့၏ ဂွိုလျသကျအတိုငျး စတငျရှတျဆိုနိူငျပါသညျ။
၂။ တစျနေ့ခွငျးလညျး ရှတျနိူငျပါသညျ။
၃။ တစျနေ့တညျး ဂွိုလျသကျစုံအောငျ ရှတျဆိုနိူငျပါကလညျး စသညျ့နေ့၊ စသညျ့ဂွိုလျမှ ဆုံးအောငျ၊ ၁၀၈ ခေါကျပွညျ့အောငျ ရှတျဆိုနိူငျပါသညျ။
၄။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့အတှကျ အပွီးရှတျ၍၊ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ နောကျပိုငျးမှာ ရာဟူဂွိုျလျအတှကျ ရှတျပေးရပါမညျ။
၅။ ရနျဖွစျစရာကိစ်စမြား၊ စကားအခွအေတငျ ပွောရခွငျးမြား ပေါျပေါကျလာပွီး အစမျးသပျ ခံရပါလိမျ့မညျ၊
၆။ မတေ်တာဖွငျ့ သီးခံပွီး ရှောငျရှားပေးခွငျး၊ ပွနျမပွောခွငျးဖွငျ့ ရနျကိုရှောငျရပါမညျ။
၇။ ပွိုငျလာလြှငျ အရှုံးပေးခွငျး နညျးကိုသာ ရှေးခယြျရပါမညျ၊
၈။ ဤမတေ်တာကငြ့ျစဉျမှာ အစမျးသပျ ခံရပွီးမှသာလြှငျ အဆငျ့ တကျမညျဖွစျ၍ သတိထားပွီး ရနျကိုရှောငျပေးပါ။
၉။ ရရှိလာမညျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြာမှာ–
(၁) မတေ်တာသုတျျ ရှတျဆိုမညျ့ ရှေ့တညျ့တညျ့တှငျ သောကျျရထေား၍ မောသညျ့အခါ ထိုရကေိုသောကျွခငျးဖွငျ့ မညျသညျ့ဘေး ပယောဂရောဂါဆိုးမြား မကရြောကျနိူငျတော့ပါ။
(၁) ၄၅ ရကျ အတှငျးမှာပငျ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြား စတငျပေါျပေါကျတတျပါသညျ။
(၂) ဆကျလကျ ကငြ့ျကွံနိူငျပါက ၃ နှစျအတှငျး ယခုဘဝ တစျသကျစာအတှကျ စားဝတျနရေေးကိစ်စမြားအတှကျ မပူမပငျ မကွောငျ့မကွမတောငျ့တရဘဲ အားလုံးပွညျ့စုံပွီးဖွစျပါလိမျ့မညျ။
(၃) ရှတျဆဲကာလ တစျနေ့နေ့ တစျခြိနျခြိနျတှငျ ရှတျဆို၍ အလှနျကောငျးမှနျလာပွီး စိတျ၏ခမြျးသာခွငျး ကိုယျ၏ခမြျးသာခွငျးမြားဖွစျပေါျလာ၍ စတုတ်တစြာနျအဆငျ့ကိုပငျရရှိနိူငျပါသညျ။
(၄) ထိုမှတစျဆငျ့ ဝိပဿနာကူး၍အားထုတျခဲ့ပါက လှယျကူလငြျမွနျစှာတရားထူးတရားမွတျကို သခြောပေါကျ ရရှိနိူငျပါသညျ။
၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္14.3.2019 မွ 20.3.2019 အထိတစ္ပတ္စာကံၾကမၼာ ေဟာစာတမ္း…!
ေ႐ႊမႈန္ရတီ နဲ႔ တူတယ္ဆိုၿပီး နာမည္ႀကီးလာခဲ့တဲ့ တက္သစ္စမင္းသမီးငယ္ေလး…!
This Month : 37445
This Year : 232843
Total Users : 591867
Total views : 2717045